[သင်ခန်းစာ – ၁၀] Multiple classes များကို အသုံးပြုခြင်း - Acroquest Myanmar Technology
[သင်ခန်းစာ – ၁၀] Multiple classes များကို အသုံးပြုခြင်း
အရင်က သင်ခန်းစာတွေ ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုသင်ခန်းစာအထိ　Java မှာ “class representation” ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့မှာပေါ့။ “class” တွေအကြောင်းကို “program” အမျိုးမျိုးမှာရှာပြီး လေ့ကျင့်တာကောင်းပါတယ်။ ဒါဆိုသင်ခန်းစာ ဆက်လိုက်ကြလိုက်ရအောင်။ အခု “class” တခုကနေ “class” အများကြီးအထိ “create” လုပ်ကြရအောင်။
အခု “ClassSample” ဆို တဲ့ “class” နဲ့ “AnotherClassSample” ဆိုတဲ့ “class” ကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း တည်ဆောက်ကြမယ်။
“File” တွေရဲ့နာမည်ကို “class” တွေရဲ့နာမည်အလိုက် ပေးပြီး “save” ပါ။
“File name” က “ClassSample.java”
private String msg; // (1)
System.out.println(“Constructor Was Called.”); // (2)
public void setMessage(String inMsg)
msg = inMsg; // (3)
System.out.println(“message:” + msg); // (4)
ClassSample classSample; // (5)
classSample = new ClassSample(); // (6)
classSample.setMessage(“Hello Java World! “); // (7)
classSample.printMessage(); // (8)
AnotherClassSample anotherClass = new AnotherClassSample(); // (9)
anotherClass.printName(); // (10)
anotherClass.setName(“bar”); // (11)
anotherClass.printName(); // (12)
“File name” က “AnotherClassSample.java”
public class AnotherClassSample
private String name; // (A)
public AnotherClassSample() // (B)
System.out.println(“AnotherClassSample Constructor!! “); // (C)
name = “foo”; // (D)
// name setting
name = new_name; // (E)
// name indication
System.out.println(“My name is ” + name + “.”); // (F)
“Class” တွေ “create” လုပ်လို့ ပြီးသွားရင် “ClassSample” ဆိုတဲ့ “class” ကို “compile” လုပ် ရအောင်။
“Compile” လုပ်ရမဲ့ အဆင့်တွေကို မှတ်မိသေးရဲ့ လား။ အခု “compile” မလုပ်ခင်မှာ “ClassSample.java” ရှိတဲ့ “directory” ကို “command prompt” ကနေသွားထား လိုက်ပါ ။ တကယ်လို့“compile” လုပ်တဲ့အချိန်မှာ “ClassSample” နဲ့ “AnotherClassSample” ရဲ့ “File” တွေက တူညီတဲ့ “directory” အောက်မှာ မရှိဘူးဆိုရင် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း “error message” ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ “error message” ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် “[သင်ခန်းစာ -၂] – Java Program အခြေခံ တည်ဆောက်ပုံ” တုန်းက သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း “CLASSPATH Variable Setting Up” လုပ်တာကို သေချာအောင် စစ်ဖို့ မမေ့နဲ့ နော် “Compilation” လုပ်လို့ ရသွားပြီဆိုရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း “Output” တွေ့ လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း နံပါတ် (9) က “AnotherClassSample” ရဲ့“constructor” ကိုခေါ်တယ် နံပါတ် (10) နဲ (့12) မှာက “AnotherClassSample” ရဲ့ ”name information” တွေကို “display” လုပ်တယ် နံပါတ် (11) မှာက “name information” 1 ခု ကို ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
“ClassSample class” ရဲ့ “instance” တစ်ခုတည်ဆောက်တုန်းက နံပါတ် (5) မှာ “class” ကို “declare” လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ နံပါတ် (6) မှာ “instance” တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ “class” ရဲ့ “declaration” နဲ “instance creating” ကို နံပါတ် (9) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း တစ်ကြောင်းတည်း နဲ့ ရေးနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ် (10)ရဲ့ “printName() method” ကို “run” ပြီးတဲ့နောက်မှာ “name field” ရဲ့ တန်ဖိုးက D မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း “foo” ဆိုတဲ့ “value” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နံပါတ် (11) ကို “run” ပြီးတဲ့အချိန်မှာ “name field” က “foo” ကနေ“bar” ဆိုတဲ့ “value” အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ဒါကြောင့် နံပါတ် (12) ရဲ့ “printName() method” ရဲ့ အဖြေအနေနဲ့ ”bar” ဆိုတဲ့အဖြေကိုတွေ့ ရမှာပါ။
“Class” တစ်ခုနဲ့အဲဒီ “class” ကနေအခြားသော “class” တွေရဲ့ “function” တွေကို ခေါ်သုံးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
“Class” တွေခွဲခြင်းအားဖြင့် အဲဒီ “Class” တွေရဲ့ “function” တိုင်းကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုဖို့ လွယ်ကူသွားပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ “AnotherClassSample” ဆိုတဲ့ “class” ထဲမှာ “name” ဆိုတဲ့ “field name” ရဲ့ “data” ကို သိမ်းတာနဲ့ ”name” ရဲ့ “data” ကို “screen” ပေါ်မှာ ပြပေးတဲ့ “function” နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က “function” တွေ ထပ်ထည့်ချင်တယ် ပြင်ချင်တယ်ဆိုချင်တယ်ဆိုရင် “AnotherClassSample class” တစ်ခုကိုပဲ ပြင်ရုံနဲအခြား “class” တွေကနေ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
“class” တစ်ခုထဲမှာ ပြောင်းလဲတာတွေ၊ ပြင်တာတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ဒါတွေက “class” တွေကို ခွဲဖို့ အတွက်အကြောင်းပြချက် အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
“Class” ခွဲတာကို ကိစ္စတိုင်းမှာ ကောင်းတယ်လို့တော့ အကြံမပြုချင်ပါဘူး။
တကယ်လို့ အချို့ သော “program” တွေက “class” အသေးလေးတွေအဖြစ် အများကြီးခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ “classes” တွေကို “create” လုပ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်တောင်မှဘဲ အဲဒီ “classes” တွေထဲမှာ ဘာတွေပါနိုင်မယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး၊
ဒါ့အပြင် အဲဒီ “class” တွေကို အသုံးပြုရတာ အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာ တွေ့ ရလိမ့်မယ်။
၁။ “Class” နှစ်ခုအသုံးပြုပုံ။
၂။ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းမှာ “class” ရဲ့ “instance” ကြေငြာခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်းကို ဘယ်လိုရေးရမယ်ကိုသိစေရန်။
၃။ “Classes” တွေခွဲရခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလည်စေရန်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ “class” တစ်ခုထက်ပိုပြီးသုံးပုံးသုံးနည်းကို လေ့လာခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ “sample program” တစ်ခုရဲ့ “level” ကရောက်သွားပါပြီ။
အရင်က “program” တစ်ပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင် “create” လုပ်ချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးလို့ ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကထက် အခုအချိန်မှာ “program” တစ်ပုဒ်ကို “Create” လုပ်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာရပ်ကြတာပေါ့။
ဆက်ရန် => (Lecture 11: Program ရဲ့ အခြေခံ သုံးချက်ထဲက processing အကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြရအောင်)